प्रचण्डलाई राष्ट्रपती बनाएर पार्टी एकिकरण गर्ने यस्तो छ योजना !::– Nepal's Digital Paper
प्रचण्डलाई राष्ट्रपती बनाएर पार्टी एकिकरण गर्ने यस्तो छ योजना !
काठमाडौं – नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई माओवादी केन्द्रसंग पार्टी एकता गर्न तयार रहेको खुलासा भएको छ । माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आफूलाई भेट्न पुगेका केही नेताहरुसँगको भेटमा माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापा (बादल)ले उक्त कुराको खुलासा गरेका हुन् ।
पाँच ‘स’ को अवधारणा सहित गठन गरिएको नयाँशक्ति स्थापना भएको एक वर्षमै त्यहाँ रहेका थुप्रै चर्चित नेताहरुले पार्टी परित्याग गरेपछि भट्टराईको बैकल्पिक शक्ति बनाउने अभियान त्यतिकै विफल भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गोरखाबाट चुनाव जितेका भट्टराईको पार्टी समानुपातिक तर्फ तीन प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन ।
यस्तो छ बादल बाबुराम योजना:
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रामबहादुर थापा बादललाई राष्ट्रपती बनाउने योजना अघी सारे संगै बादल खेमाका केहि नेताले यसको बिरोध गरेका थिए ।
राष्ट्रपती आलंकारिक पद रहेको र सकृय राजनिती गरेर कार्यकारी नेतृत्व लिने मनस्थितिमा बसेका बादल भित्री रुपमा यो प्रस्ताव प्रती खुशी छैनन । बरु बादल दुई पटक प्रधानमन्त्री भईसकेका प्रचण्ड राष्ट्रपती बनिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन ।
केहि समययता निरन्तर गोप्य संवादमा रहेका बादल र बाबुराम बिचको भेटमा भट्टराईले बादललाई भाबी प्रधानमन्त्री भन्दै राष्ट्रपती प्रचन्डलाई बनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको स्रोतको दाबी छ ।
डा. भट्टराइले आफुलाई एकिकृत पार्टिको अध्यक्ष बनाए पार्टी एकता गर्न लचक हुने संकेत गरेको एक नेताले नुवाकोट एक्स्प्रेसलाई बताए ।